Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Misokatra malalaka ny vavahady fizahan-tany any Hawaii
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Hita • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Manomboka rahampitso 8 Jolay 2021, ireo mpitsangatsangana an-trano tonga any Hawaii dia mety hiditra amin'ny fanjakana ary handalo ny fitsapana COVID-19 sy ny quarantine rehefa tonga raha manana pass de vaksiny navoakan'ny CDC izy ireo hanamarinana fa vita vaksiny tanteraka izy ireo.
Izany dia nambara tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay vao nifarana tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Daniel K. Inouye.
Nanamafy ny fanjakana fa ny ezak'i Hawaii dia tsy atao amin'ny fandrindrana miaraka amin'ny torolàlana manampahefana federaly.
Ireo mpitsangatsangana vita vaksiny any Etazonia na ny faritaniny dia mety handray anjara amin'ny fandaharana manomboka amin'ny andro faha-15 aorian'ny fatra faharoa amin'ny vaksinin'ny Pfizer na Moderna na fatra tokana amin'ny vaksinin'i Johnson & Johnson.
Ireo mpitsangatsangana vita vaksiny any Etazonia na Etazonia Territories dia mety handray anjara amin'ny fandaharana fanombohana manomboka amin'ny andro faha-15 aorian'ny fatra faharoa amin'ny vaksinin'ny Pfizer na Moderna - na manomboka ny andro faha-15 taorian'ny nahazoan'izy ireo fatra tokana tamin'ny vaksinin'ny Johnson & Johnson.
Raha nanontanian'i eTurboNews, Dia mazava fa hadilanana vaksiny tsy aneken'ny manam-pahefana avy any ivelany.
Ireo mpandeha avy any Hawaii dia mila mampakatra ny iray amin'ireo antontan-taratasy fanaovana vaksininy telo ao amin'ny kaonty Safe Travels Hawaii napetrak'izy ireo, alohan'ny handehanana any amin'ireo nosy. Ny iray amin'ireto antontan-taratasy manaraka ireto dia tsy maintsy apetraka:
Karatra firaketana vaksiny CDC COVID-19.
Fanontana VAMS (Rafitra fitantanana fitantanana vaksiny).
DOD DD endrika 2766C.
Ny sehatra nomerika Safe Travels dia hangataka fanamarinana ara-dalàna an-tserasera amin'ny tranokalan'izy ireo hanamafisana fa marina sy marina ireo antontan-taratasy nakarina.